Polyphenylene Ether, Hydrazine Hydrate, Pesticide Intermediate - Juxing
Hebei Juxing mba ahia co., Ltd., e guzobere na August 2019, nke dị na jize functionnal ebe nke qingdao freetrade port, ọ dị nso na ụgbọ okporo ígwè hanhuang na 311.318 ụzọ mpaghara, okporo ụzọ ahụ dị nnọọ mma, uru ọnọdụ ahụ doro anya.
Anyị nwere mba elu nzukọ akara na mmepụta technology, nlezianya mma akara management usoro.
AD-67 Mgbochi, CAS: 71526-07-3
Hydrazine na-edozi, Cas 7803-57-8
anyị ndụmọdụ ịhọrọ
mkpebi ziri ezi
Mere họrọ anyị?
Hebei Juxing mba ahia co., Ltd., E guzobere ya na August 2019, nke dị na jize functionnal ebe nke qingdao freetrade, ọ dị nso na ụgbọ okporo ígwè hanhuang na ụzọ 311.318provincial, okporo ụzọ ahụ dị nnọọ mma, uru ọnọdụ ahụ doro anya .. .
1. Bwe nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ 5000 + m2 mmepụta isi.
2. Complete àgwà nnyocha usoro.
3. Ọkachamara R&D otu nkwado.
4. Ndi oru ahia ruru eru nke oma, oru 24/7.
anyị ga-ahụ na ị na-enweta mgbe niile
nsonaazụ kacha mma.
Anyị nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke 5000 + m2. A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ụwa niile. Nabata na-akwado anyị.
Na mba elu nzukọ akara na mmepụta technology, nlezianya mma akara management usoro
Anyị nwere ọkachamara R & D otu na ndị ahịa ahịa dị mma, ụbọchị niile iji nye gị ọrụ nchere.
Dị na Qingdao, nso ụgbọ okporo ígwè na okporo ụzọ mpaghara, njem na-adaba adaba, uru ọnọdụ doro anya.
Anyị na-anọgide na-akpa àgwà nke ngwaahịa na-achịkwa nditịm na-amị Filiks, mere ka imewe nke niile ụdị.
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma yana kredit ịhapụ anyị ka anyị nwee ike ịhazi ọtụtụ ngalaba alaka ụlọ ọrụ na ndị na - ekesa mba anyị.
Ebe ọ bụ na ya oruru, anyị factory e-emepe emepe mbụ ụwa na klas ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ nke àgwà mbụ. Ngwaahịa anyị enwetala ezigbo aha na ụlọ ọrụ ma baa uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie ..
nyefee ugbu a
kacha ọhụrụ ozi ọma & blọọgụ
Onye mbido ọkụ Na sistemụ fotocurable, gụnyere UV gluu, mkpuchi UV, ink UV, wdg, mgbanwe kemịkal na-eme mgbe ịnata ma ọ bụ na-amịpụta ikike dị na mpụga, wee banye n'ime radicals ma ọ bụ cations n'efu, si otú a na-ebute mmeghachi omume polymerization. Ndị na-ese foto bụ ihe nwere ike mepụta f ...
Pharmaceutical intermediates Na 1990 s, anụ ụlọ mmepụta nke amonia thiamethoxam oxime acid nke ihe karịrị 20 ụlọ ọrụ ahịa asọmpi na-esiwanye di ọku mpi n'etiti ụlọ ọrụ na-mere site oru ohuru mbụ ada na-eri ruo ugbu a anụ ụlọ amonia thiamethoxam ...
Pesticide n'etiti Pesticide bụ ụzọ dị mkpa nke mmepụta ihe ọkụkụ, nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịchịkwa ọrịa, pests na ahịhịa, na-edozi ma melite mkpụrụ osisi. Agbanyeghị na ọnụahịa nke ngwaahịa ugbo, mpaghara akuku, ihu igwe, ...
Laboratories ejiri mee ihe nyocha sayensị nwere ọtụtụ ụdị n'ihi ọdịiche. Anyị na-enye zuru ezu usoro piping ike.